Abantu abaningi abahlala emadolobheni dream ukuphuma ubunjalo ekukhishweni ngakunye. Novosibirsk izakhamizi akadingi ukuya kude, ngoba ilungelo ngaphakathi kwemingcele umuzi wabo omangalisayo kunendawo encane kodwa kuhle kakhulu Bear Lake. Leninsky wesifunda lapho itholakala, ecebile izinto zemvelo. insimu yalo siphela ob, kukhona amapaki, emiseleni ayecashe kuyo futhi Zatoka, lapho uthanda ukuchitha isikhathi izakhamuzi. Kodwa ingxenye yawo esele kuleli chibi Bear, mhlawumbe ethandwa kakhulu. Okokuqala, kulula kakhulu ukuthola le ndawo, futhi okwesibili, zonke kahle equiped futhi wabaphakamisa, okwesithathu, ngokusebenza lapha abantu abanomusa kakhulu ngokwemvelo futhi ube nobungane.
Novosibirsk akuyona kuphela echibini, kodwa le nkampani ngokuthi "Bear Lake." ehhovisi lakhe itholakala ngqo eceleni echibini eponymous ku: wesifunda Leninsky, emgwaqweni Isiteshi, ukwakha №84 / 2. Le ndawo Kuyaziwa ukuba izakhamuzi eziningi edolobheni. Eduze mgwaqo Yagodinska. It kuholela emphakathini engadini "Birch", engaphezulu nje echibini. Kukhona esitolo "Ukhululekile." Vele ngezansi, nje ngakolunye uhlangothi lomgwaqo yiyona uphethiloli engadini inhlangano "Golden Autumn". Ngaphambi kokuba lifike kuleyo ichibi mayelana 1000 amamitha, ungabona Novosibirsk emjahweni, futhi ikhilomitha ukusuka echibini bebheke sezindiza itholakala Fairgrounds.
izakhamizi City nje ukuza Lake Bear. Novosibirsk - idolobha elikhulu kunawo wonke eSiberia, esesikhundleni kwingqalasizinda yathuthukisa uxhaxha yayo ezokuthutha. Emigwaqweni we uphethiloli Shuttle inombolo ibhasi 10 (iza Akatuyskogo zhilmassiva), inombolo 111E (kufanele kube kusuka sebhasi ukuze sezindiza), inombolo 112 (umzila ne STC "Mega" esikhumulweni sezindiza), inombolo 340 (ke kufanele sibe "boatman" isiphetho). Udinga ukuphuma esitobhini "Bear Lake." Ukufinyelela okulula kwesigubhu kanye ngemoto. Hamba ezindleleni eziphumela ngaphandle komuzi maqondana sezindiza okudingayo.
Mhlawumbe igama "Bear Lake" (Novosibirsk) unikezwa emanzini, ngoba iminyaka engamakhulu amabili edlule, ebhongile ehlathini namabhere zazulazula nxazonke. Kodwa asebemnkantsh 'ubomvu ungakhumbuli obunjeya. Ngayiphi manje ethi awafike echibini, kwaba ixhaphozi, ehlobo ezomile futhi ligcwele udaka ezingcolile kuyi-udaka. Ngalesi sikhathi lapho wanqoba kuphela amaqulo omiyane. Kodwa iziphathimandla zedolobha unqume ennoble insimu, baletha lapha zivusa kwezinyanga ezimbalwa esizeni ixhaphozi wadala echibini emangalisayo. ubude kuyinto 620 metres uphinde uthele kancane ububanzi ubuncane 111 metres kuya kwayi-220 metres. Njengoba echibini sidalwe dredger, ukujula yayo engalingani kakhulu ukujula. Kukhona izindawo lapho ukufinyelela kuphela ambalwa amamitha, kodwa futhi kukhona labo lapho phansi 10 metres. aluhlaza echibini osebeni kwezinye izindawo nezihlahla zikhule. On the ingxenye s / t "Birch", Jagodina eduze komgwaqo, ifakwe ebhishi-epaki. On esesayidini ebhishi kancane ifakwe, kodwa lapha kukhona Grove birch.
phansi Sandy kwesigubhu, ahlanzekile anele, kodwa amanzi namanje enodaka. Ehlobo kungenzeka ukubona eziningi ulwelwe. Nokubhukuda kungavunyelwe, njengoba baxwayisa izimpawu, kodwa laba bantu abambalwa unake.
Iningi abahlala emadolobheni ukuza Lake Bear (Novosibirsk) ehlobo. Isebenzisa okufanayo negama nokungcebeleka. On endaweni yayo ungakwazi ukuqasha Gazebo ethokomele embozwe anemisila isokhethi. Zonke loMfula emadokodweni eziningana, ngayinye nge itafula nezihlalo, kukhona izoso. Intengo ngobusuku ukuqasha ngehora - ruble 350, futhi usuku lonke - ruble 2000. Esikhungweni ukuzilibazisa kungenzeka ukususa indlu ehlukene, noma bathhouse isiRashiya, ukuqasha isikebhe. Well eze lapha kanye nezinkampani, futhi abazali nezingane. Le ndawo enhle, imigomo nokuhlanzeka, ogwini esihlabathi esiphuzi, ahlomele izingane Sandbox abadala setha idokodo, lapho ungakwazi ukushintsha izingubo.
Ebusika, ukuzijabulisa abasebenzi echibini ukuhlela i-track ice, bamba nemincintiswano yokubona umklomelo abawinile. Ngaphezu kwalokho, phakathi nezinyanga zasebusika nayo ezisebenza Gazebo nge izoso namabhati, okuyinto zinama ngenombolo amafonti for ukubhukuda.
Sekuyisikhathi eside Abathandi ukudoba baziswa Bear Lake (Novosibirsk). Ukudoba lapha esisodwa waba esikhokhelwayo, ngoba osomabhizinisi yangasese umkhankaso ibe carp Echibini utshani futhi carp. Intengo kwaba ruble 500 ngoba lolo ngamunye. Kodwa, ngokusho kwemibiko okwalandela labadobi, manje imali uyekwa. On echibini njalo kuhle isilinganiso ngobukhulu babanjwa carp, perch kanye isikhuphashe. Kanye kwesigubhu, kude ebhishi, yona ifakwe amabhuloho, kodwa ezinye zibanjwa futhi umane kusuka ogwini.
Ngithanda izakhamuzi echibini elincane kodwa olunothile kuyinto bearish. Novosibirsk - kwedolobha lapho inqwaba izinkampani abasebenza emigwaqweni nezinkulungwane izimoto engahlelekile. Konke lokhu elilulaza imvelo. Ngakho-ke, lapho zibaluleke kangaka into ngayinye zemvelo, lapho abantu donsa amaningi umoya ohlanzekile fresh. Novosibirsk waphawula elithola echibini ezifana:
yonke into ihlanzekile futhi kahle;
Abasebenzi friendly esikhungweni ukuzilibazisa, inhloko endaweni ebhishi-epaki echibini;
I yokuntula esemqoka imi kanje:
phakathi beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni wathola esindayo abaphuza ungubani ezihlupha ezinye, kwenza umoya kwemizwa;
ezinye beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni siyekele udoti, konakalisa lonke ubuhle izindawo ezizungezile.
Ngakho singaphetha ngokuthini? Bear phezu Lake Novosibirsk iholide ephelele abadala kanye nezingane, kanye nayo yonke imibono musa ubheke echibini, futhi kulabo angakawamukeli bafunda nokwazisa izici nokwazisa ubuhle.
Suprapatellyarny bursitis ka kwedolo: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Isiraphu Marshmallow ukusiza izingane kanye nabantu abadala
Lokho kungaba ingadliwa kokuthunyelwe